Ngubani kweli hlabathi alithandi izilwanyana, ngakumbi izilwanyana zasekhaya? Emva koko, bahle kwaye banomdla. Ngokuqinisekileyo abantwana bayabathanda. Yiloo nto ihlala iyingxaki-ukunakekela kwabo. Ukunyamekela izilwanyana kunzima okanye akunjalo.
Ixabiso kunye neyinkimbinkimbi - le yimiqathango echaphazela ukhetho lwesilwanyana. Akukacaci ukuba yiyiphi inqobo abantwana abakhethayo izilwanyana zabo, kuba bengayithobeli iindleko okanye ubuhle, yintoni ebakhangayo? Mhlawumbi lo buhlobo, mhlawumbi ukubonakala. Kodwa oku akubalulekanga ngokukhethekileyo, kuba igama lokugcina kubazali abaya kuthenga, ukuhlawula, kwaye kungekudala, kwaye banakekele eli silwanyana. Xa bengakhangeli ixabiso kakhulu, bacinga ngokunyamekela kwabo. Ngaba kunzima kangakanani ukunyamekela isilwanyana, nokuba kuyimfuneko ukuyithatha yonke into, okanye mhlawumbi, iya kuncitshiswa kwenye, kodwa isilwanyana esifanayo. Ngoko, ngokuqhelekileyo, kwaye wenze. Umzekelo, ukuba uthatha inja, kudinga ukunakekelwa kakuhle, nangona kuya kuvuyisa. Umzali unquma ukuthatha into engaphezulu "engacacile", nayiphi na i-rat. Lihlekisa. :) Yiyo ke, bhala ingqalelo kwiinkibe zeginea, kuba zilungile kakhulu. Ungaziqwalasela njani, njani? Ngoko bathabatha le ngulube. Kwaye ke kufuneka wenze ntoni? Ngokuqinisekileyo, abanini banokukhawuleza baya kwi-Intanethi ngombuzo othi "njani ukunyamekela ihagu zeginea? ". Wena, mhlawumbi, ngoko ufike apha. Ewe, ngoko siza kuqala. Kodwa masithi kusengaphambili, akukho nto inzima ekunyamekeleni ihagu zeginea, ngoko ungakhathazeki.
Kufuneka ukwazi iingongoma eziphambili eziza kunceda ekunyamekeleni iibhagi ze-guinea, zilapha: ihagu ye-guinea kufuneka ibe neqhekeza elibanzi, intambo enhle (ingqungquthela encinci) yokuphumla, eqinisweni, umntu akakwazi ukwenza ngaphandle kwedoti ye-toy, indlu yangasese yangasese ene-granular filler, iindawo ezahlukeneyo zokulenga, ngokufanelekileyo, ukutya okuninzi okumnandi kumbala. Ezi zizona ngongoma eziphambili esiza kuzijongela ngoku ngokubanzi iinkcukacha.
Okokuqala. Makhe sixoxe ngezinto eziya kuba yingozi kwiingulube zisetyenziswa. Oko kukuthi, yintoni okufuneka uyifihle kude nabo, ukuze ungahlaziyi kwaye utyhefu ngokwakho, okwenzeka rhoqo. Nantsi ke uluhlu lwezityalo ezinobuthi: ivy, hedera, polisi, i-fatsia, i-shefflera, i-aglaonema, i-alocasia abanturium diffenbachia, i-calla, i-monstera, i-spathiphyllum, i-syngonium, i-oleander, i-pachipodium, i-cyclomene, i-alo, i-ficus kunye nabanye. Isityalo ngasinye sichaphazela isilwanyana ngezindlela ezahlukeneyo, kodwa iziphumo zibuhlungu kumntu wonke. Zininzi zenza amadideli ahlukeneyo okutshisa, izilonda, kunokubakho ukuvuvukala kweembrane zamehlo (kungakhokelela ekubumpeni), ukuvuvukala komlomo, i-pharynx, i-heart and nervous disorder and other consequences.
Elinye iphuzu elisebenzayo kuzo zonke izityalo: ukuba zanele ngokwamaphecana avela kule mijelo ingena emlonyeni wakho, i-asidi eyahlula iya kuphelisa ngokupheleleyo ukuphefumula kwesilwanyana kwaye iya kufa.
Ngoku makhe sithethe ngesondlo esifanelekileyo. Ukongeza kokutya okusemgangathweni, ihagu kufuneka ifumane imifuno kunye neziqhamo ekudleni kwayo, kodwa akuyimfuneko ukuyidlula. Inani labo kufuneka libe li-moderation - 80-120 amagremu ngosuku, kwaye ke, iincinci ezimbalwa. Ungakulibala ukuhlamba ukutya ngaphambi kokuba unike isilwanyana.
Nangona kunjalo, iibhabhane ze-Guinea azifanele zondliwe ngeembotyi, i-anyanisi okanye iizambatho. Iklabishi inokunikezwa kubo, kodwa ngokusemgangathweni, kwaye kaninzi kangcono, kulunge. Kuyafana okufanayo malunga neepeas. Wena inkululeko epheleleyo unokubanondla ngoncedo lweemifuno ezahlukeneyo kunye nemifuno, kodwa kufuneka ziqokelelwe yimigudu yazo. Kufuneka baqokelelwe kwindawo ezinobungcipheko, ukuze bangcoliswe ngotshani kwimoto kunye nezinto ezifana.
Ukunyamekela ngokufanelekileyo akulona ubugcisa, kulandele imithetho ethile. Ngokomzekelo, makhe sikhulume ngethuba lokutya kweengulube zeginea. Kungcono ukuwondla kusasa nangokuhlwa, oko kukuthi, ezimbini ukutya ngosuku. Kodwa kufuneka wenze oku ngexesha elifanayo, ngenxa yokuba inyama yezilwanyana isetyenziswe ngokuchanekileyo ngexesha, isidlo silungiselelwe kwangaphambili. Ukuba unomfazi okhulelweyo, ngoko kufuneka utyise amaxesha 3-4 ngosuku.
Ukuba awunalo ithuba lokutya isilwanyana sakho kunye nemveliso yendalo, kodwa yodwa eyomile, kufuneka udibane neengcali malunga nokukhetha okulungileyo, kuba ngoku banokubeka nayiphi na into abayifunayo, apho ifuyo lakho lingahlali. Yaye ngokwabo, ukufumana imveliso esemgangathweni, akunjalo lula.
Ukutya, okuqinisekileyo, kufuneka kwenziwe ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokugqibela obusebenzisa iimveliso zendalo eziya kuqinisekisa ukuba umgangatho ophezulu wento eyenziweyo. Ukutya kufuneka kube nobunzulu obuhle, apho kuza kubakho inani lamavithamini, eliya kunceda ukugcina ukhuseleko lwama-mumps.
Ukuba sithetha ngokutya okomileyo, kufuneke ukuba siqaphele ukuba kwelinye ilungiselelo le-ngulube inikwe isahlulo sokutya okumeleyo, okulingana neyipunipoli enye. Iigogo azibekezeli ukuzila ukudla, ngoko kungcono ukuwanika ukutya ngokwaneleyo, ngaphandle koko iingxaki zivela. Ukuba ufuna ukutshintsha ukutya kweemvumba zakho, ngoko kufuneka wenze oku ngokuthe ngcembe.
Iigogo ziyakuthanda izidlo ezimnandi kakhulu. Ziziphi iindawo ezisemagqabini? Ngokuqhelekileyo - ziqhamo zentyatyambo, kodwa azidingi ukuba zininzi. Umzekelo: amapheya, ii-apula, iidiliya, iitato, i-strawberries ... Ininzi yazo zonke, iifolo ziyakuthanda iintlobo ezintle zama-apula - zinokunikezwa nayiphi na uhlobo (eluhlaza / omisiwe). Ziqukethe inani elininzi lezinto ezincedo, njengevithamini, iicidi, i-fructose, i-fibre, inani elikhulu le-pectin kunye nokunye okuningi ...
Ewe, namhlanje sikuxelele indlela yokunyamekela ngokufanelekileyo izilwanyana ezinje njengeengulube zeginea. Siyathemba, ulwazi olufunyenweyo luyakunceda ngonyango lwezilwanyana ozifunayo. Uya kuvuya ngayo yonke into. Kodwa ungayikhohlwa ngothando kunye nothando, omele uhlawule kwiimvumba, kuba ngaphandle kwayo akakwazi ukuhlala ngqo. Inhlanhla kuwe!
Impembelelo entle yezilwanyana kubantu
I-Pet kunye nosana kwindlu enye
Izifo zezinja, unyango lwabo kunye nokuthintela
I-Little Shih Tzu Inja
Isobho nge sipinashi kunye namaqanda
I-Horoscope ngoNovemba ka-2017 - I-Scorpio ibhinqa-ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Kuchaneka njani ukuba usebenze ngokusemandleni ukuqina?
Ukuhlawula emva kwecandelo le-calar: ubuchule, iimpawu, iingcebiso
Yintoni endiyifunayo xa ndikhetha izicathulo zabantwana?
Ukuthintela izifo ezithathelwana ngesondo ngesondo esingakhuselekanga ngokwesondo
Ukondla umntwana luxesha elibalulekileyo
Intombazana egqoke umtshato kwiphupha
Imveliso yokuzivocavoca: isethi yokuzilolonga
Utywala kunye nokuncelisa
Feijoa kunye ne-cranberries kwiswekile
Izindlela zokuphuhlisa ukucinga kwizingane zasesikolweni
I-recipe yaseGeorgia evela kuTina Kandelaki: i-lavash ihamba nge-garlic sauce, iminwe ithole
Ukuphuhliswa kwengqondo kunye nokudlala kwintsana
Izimpembelelo zamazinyo: izibonelelo kunye neengxaki
Ukutya okonyango kubanda
Indlela yokuzithandayo: iingcebiso zengqondo yengqondo
Isaladi kunye nenkukhu, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kunye ne-apula